Ifulethi elithokomele neligqamile eceleni kwe-Colosseum - I-Airbnb
Ifulethi elithokomele neligqamile eceleni kwe-Colosseum
Ifulethi litholakala esitezi sesibili sekhulu le-18 lasendulo esakhiweni samatshe esivela e-Colosseum. Ivulekile futhi igqamile, kusuka efasiteleni ungajabulela i-Fori Imperiali. Ifulethi elingamakhilomitha-skwele angu-55 lingathatha abantu abangaba ngu-4, linehholo lokungena, igumbi elikhulu lokuphumula elinekhishi elinakho konke i-crockery edingekayo nombhede olala abantu ababili, ikamelo lokulala elilala abantu ababili, indlu yokugezela evulekile kanye ne-balcony yabantu abashayayo.
Ilungiswe ngokuphelele ngesitayela esilungisiwe.
angu-55 - i-wifi yamahhala
nenomkhawulo - I-Air conditioning kanye nokushisisa nge-condoctors.
- 43 "HD Smart TV
- Indlu yokugezela enkulu eneshawa, umshini wokomisa izinwele, insipho.
- Ikhishi eline-microwave, iketela nayo yonke ifenisha edingekayo.
I-HDTV ene- I-Amazon Prime Video, I-Chromecast, I-Netflix
4.95 · 194 okushiwo abanye
Ifulethi lisenhliziyweni ye-Rome Yamandulo. Ungajabulela okokuzithokozisa kokubheka i-Imperial kusuka efasiteleni lakho.
Ekhoneni, ukuhamba imizuzu embalwa ukusuka efulethini, yi-Colosseum ne-Domus Aurea ngakolunye uhlangothi kanye ne-Rione Monti ejabulisayo ngakolunye uhlangothi, nezitolo zayo eziningi nezindawo zokudlela.
Endaweni engemuva kwefulethi uzothola isithombe sokuqala sika-Michelangelo sika-Michelangelo, ngaphakathi kwe-Basilica yase-San Pietro e-Vincoli nase-Borgia Tower.
Siamo una giovane famiglia: Bianca, Gian Marco e il piccolo Leonardo, Jackie the Jack Russell, Bibi the Cat e Big Fish.
Amiamo viaggiare e la nostra città, per questo abbiamo deciso di unire queste passioni e crearci un business.
Kuyoba injabulo kimi ukukusiza ukuhlela ukuhlala kwakho e-Rome ngendlela engcono kakhulu. Kusukela emiyalezweni yokuqala, phakathi nosuku lokungena nangesikhathi sonke seholide lakho, ngizotholakala ukuze ngikweluleke ngezindawo ezinhle kakhulu ongazibona e-Rome, eminyuziyamu, ezindaweni zokudlela nasezindaweni ezihehayo ezinkulu.
Kuyoba injabulo kimi ukukusiza ukuhlela ukuhlala kwakho e-Rome ngendlela engcono kakhulu. Kusukela emiyalezweni yokuqala, phakathi nosuku lokungena nangesikhathi sonke seholide lak…